Ahoana ny fomba hitsapana Android 11 amin'ny solosainao mora foana sy maimaim-poana | Androidsis
Android 11 tena tsara izany. Eny, ny kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Google dia tonga miaraka amin'ny endriny feno, anisan'izany ireo emoji vaovao ankoatry ny zava-baovao. Ny olana dia mety ho elaela vao manavao ny findainao.
Tianao fitsapana android 11 fa fantatrao ve fa handany fotoana handraisana azy ny smartphone-nao? Hasehonay anao ny vahaolana tsara indrindra hankafizanao ny rafitra fiasan'i Google amin'ny biraonao na solosainao findainy amin'ny fomba tena tsotra.
Android Studio, ny fomba tsara indrindra anananao Android 11 amin'ny solosainao
Eto aho no niditra Android Studio, programa maimaim-poana mamela anao hamorona finday virtoaly hanandramana ny vaovao rehetra miaraka amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Google. Aleo tadidio fa amin'izao fotoana izao ny Pixels sy ny maodely sasany dia mifanaraka amin'ny Android 11, ka raha te hanandrana an'ity kinova ity ianao dia aleo andramana amin'ny telefaona alaina tahaka izany.
Lazao fa manana ny fahasarotiny ny Android Studio, fa amin'ny fanarahana ireo dingana ireo dia afaka manana Android 11 amin'ny PC-nao amin'ny fomba tena tsotra ianao. Azonao atao koa ny maka tahaka ny smartwatch! Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia misintona ny kinova Android Studio mety indrindra ho an'ny solosainao. Apetraho amin'ny PC na solosainao findainy ity programa ity.
Raha vantany vao nametraka Android Studio ianao, sokafy ny programa ary amin'ny «Configure» safidio «AVD Manager». Ankehitriny, tsindrio ny "Mamorona fitaovana virtoaly vaovao" hanombohana mamorona fitaovana nalaina tahaka. Azonao atao ny misafidy ny fitaovana ampiasaina, ahafahana misafidy telefaona finday isan-karazany.
Izao, raha hisafidy ny kinova Android tianao alaina tahaka dia tokony asio marika ireto manaraka ireto: "R" miaraka amin'ny API level 30, izay Android 11 beta. Ny sisa ataonao dia tsindrio ny "misintona" ary miandry ny fizotry ny fisintomana sy ny fametrahana azy. Indraindray mihalavitra kokoa ny raharaha, mahareta.
Raha vantany vao alaina ny "R" (izany hoe Android 11 Beta), kitiho ny "Next" hahitanao fa misy menio miseho miaraka amin'ireo fitaovana nanahaka sy namboarina rehetra. Mila mihodina tsingerina indroa fotsiny amin'ilay fitaovana ianao ary hanomboka amin'ny Android 11 beta. Tena mora izany! D
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Aza miandry bebe kokoa! Azonao atao ny manandrana ny Android 11 amin'ny solosainao
Nanambara i Nokia C3: efijery 5,99 ", UniSoc Chip ary Android 10